मतदान आजः ३ मतपत्र, ४ छाप, भोट कसरी हाल्ने ? - Everest Dainik - News from Nepal
मतदान आजः ३ मतपत्र, ४ छाप, भोट कसरी हाल्ने ?
काठमाडाैं, मंसिर १० । दुई संविधानसभा निर्वाचनमा दुईटा मतपत्रको अभ्यास गरिसकेका मतदानले यस पटक तीनवटा मतपत्र पाउने छन् ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ अलग-अलग पानामा मतपत्र छापिएको छ भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ एकै पानामा दुईटै सभाको मतपत्र रहेको छ ।
याे पनि पढ्नुस सबै पक्षलाई मिलाएर संविधान कार्यान्वयन गर्न भारतको आग्रह
प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभाका लागि हल्का हरियो रंगको मसीले चिह्न् छापिएका मतपत्र र प्रदेशसभाका लागि कालो मस्ले चिह्न् छापिएको मतपत्र हुनेछ ।
समानुपातिकतर्फ हल्का रातो मसीले छापिएको एउटै पानामा माथिल्लो भागमा मतपत्र १ प्रतिनिधिसभातर्फ र तल्लो भागमा मतपत्र २ प्रदेशसभा भाग १ लिएका दलहरुको निर्वाचन चिह्न् रहने छ ।
याे पनि पढ्नुस निर्वाचनमा मधेसकेन्द्रित दललाई पनि सहभागी गराउनुपर्छः गृहमन्त्री निधि
तीनओटा मतपत्र पाएका मतदाताले मतदान भने ४ ठाउँमा गर्न पाउने छन् ।
प्रत्यक्षतर्फ दुवै सभामा १, १ र समानुपातिकतर्फ एउटै पानाको मतपत्रमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि तलमाथि आफुले चाहेको दललाई मतदान गर्न पाउने छन् । खबर आजको कान्तिपुरमा छ ।
ट्याग्स: Mansir 10, nirwachan